ADY AMIN’NY COVID-19: “Manara-maso ny fivoaran’ny valanaretina maneran-tany ny Fanjakana”, hoy ny Praiminisitra – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:47
Nitondra fanazavana ny Praiminisitra.
Accueil/Songadim-baovao/ADY AMIN’NY COVID-19: “Manara-maso ny fivoaran’ny valanaretina maneran-tany ny Fanjakana”, hoy ny Praiminisitra
Nandritra ny fihaonan’ny Governemanta sy ny Depiote omaly teny amin’ny CCI Ivato no nanambaran’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta ny zava-misy eto Madagasikara sy ny zava-misy maneran-tany ao anatin’ny ady amin’ny Covid-19. Notsindriany fa tsy mbola hisy fandraisana fepetra hafa aloha hatreto horaisin’ny Fanjakana, ankoatra ny fanentanana amin’ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra, sy ny fanakatonana ny habakabaka amin’ireo firenena heverina ho “mena” amin’ny valanaretina.
Lucien R. 3 décembre 2021
Nisongadina nandritra ny teny fampidirana nataon’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta Ntsay Christian tamin’ny fifanatrehana tamin’ny Depiote teny Ivato, fa mbola miaina ao anatin’ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny valanaretina Coronavirus ohatry ny firenena rehetra maneran-tany ny firenentsika. Mbola notsindriany nandritra ny tafa fohy nataony tamin’ny mpanao gazety izany, izay nilazany fa mila tohizana hatrany ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana isan-karazany. Mirongatra any amin’ny firenen-drehetra ny covid-19 ankehitriny. Isan’izany ny ao Afrika atsimo izay sady nahitana ny “variant omicron”. Ny nosy maorisy ihany koa izay misy fahafatesana marobe ao anatin’ny iray andro monja. Etsy ankilany, efa miatrika ny onja fahadimy ireo firenena eoropeanina. Fehiny, mbola anaty ady ny eran-tany.
Nambaran’ny Praiminisitra fa nanomboka ny 23 novambra 2021 lasa teo dia nisokatra tamin’ireo sidina avy aty amin’ireo nosy manodidina isika. Ny 06 novambra no nisokatra tamin’ireo sidina avy any Eoropa. Ankehitriny, mijery hatrany ny fivoaran’ny valanaretina maneran-tany ny Fanjakana, araka ny nambaran’ny Praiminisitra. Izany, hoy izy, no nahatonga ny fanapahan-kevitra ny 27 novambra teo , izay nanakatona indray ny sidina avy any Maorisy. Tsy mitsahatra mijery ny fivoaran’ny valanaretina isika, izay efa nanana ny traikefa tamin’ny zava-niseho teo aloha, ary miomana amin’izay zavatra mety hiseho. Eo anatrehan’izany, tsy mbola hisy aloha ny fandraisana fanapahan-kevitra henjana, toy ny fihibohana sy ny fanakatonana tanteraka ny sisin-tany, fa miankina amin’ny zava-misy ny fandraisana izany.
Fepetra maro noraisin’ny Fanjakana
Nandritra ny fotoana omaly no nanambaran’ny Praiminisitra fa efa manomboka mihalefy ny valanaretina ao Morondava, raha toa kosa ka mbola tena ao anaty ady ny ao Antsirabe.
Notsiahiviny fa nanomboka ny volana martsa tamin’ity taona ity dia voatery niditra tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika, satria mbola tsy voafehy ny valanaretina maneran-tany. Isika teto Madagasikara dia niezaka, teo ambany fitarihan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika naka ireo fepetra rehetra izay mahasoa ny vahoaka Malagasy, hoy izy. Nilaina ireny fepetra maro isan-karazany ireny, nahafahantsika nifehy ny fivelaran’izany valanaretina izany teto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary hitantsika ny vokany fa tao anatin’ny volana vitsivitsy dia nihena ny tranga. Ka taorian’ny dinika nataon’ny Filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana manontolo ao anatin’ny governemanta dia nanapa-kevitra nanokatra ny sisintaniny i Madagasikara nanomboka ny faran’ny volana oktobra sy ny voalohandohany volana novambra, satria iaraha-nahalala ny fiantraikan’ny fikatonana teo amin’ny lafiny toe-karena. Tato anatin’ny roa herinandro anefa izao dia misy indray ny variant vaovao “Omicron” izay mipariaka ao Afrika ka nahatonga ny firenena maro nanakatona ny sisintaniny amin’ny olona avy amin’ny firenena maro ao anatin’ny vondrona SADC.
PARAMEDY – FITAKIANA NY IES: Namaly ny antso ny Fanjakana, hahazo ny anjarany ireo mbola tsy nisitraka
MPANAO GAZETY, MPANAKANTO AO BOENY: Nahazo toerana goavana hampiroboroboana ny sehatra misy azy ireo
DISTRIKAN’AMBOHIDRATRIMO: Namendrahana ranom-panafody ireo tranom-panjakana
FISOKAFAN’NY SISIN-TANIN’I MADAGASIKARA: Hanomboka ny 23 Oktobra izao ny sidina avy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana
ADY AMIN’NY TSY FANJARIANTSAKAFO: Nanolotra 100 tapitrisa dolara ny Amerikanina